Raha tsy nahongana Ravalomanana Tsy toy izao intsony ny fiainan�ny Gasy
Ny ankamaroan�ny Malagasy dia samy milaza avokoa fa tsy toy izao isika raha tsy nanaovana ankasomparana i Marc Ravalomanana.
Nilamina sy nirindra ny fiainam-pirenena fony izy teo amin’ny toerany ary efa tena niarin-doha ny harinkarena teto Madagasikara. Nipetrapetraka ny programam-pampandrosoana tamin’ny alalan’ny Madagasikara am-perinasa (MAP), politika natao hanatonana bebe kokoa ny olom-pirenena eny ifotony, hahafahan’izy ireo mandray andraikitra sy mandray an-tanana ny fampandrosoana. Tsy dia nisy ny elanelana teo amin’ny mpitondra sy ny entina fa voafehiny tokoa ny haitarika, izay nezahina napariaka tany amin’ireo olom-panjakana teny ifotony toy ny ben’ny tanàna sy ny sefom-pokontany nahazo fiofanana sy nihaona matetika tamin’ny filoha. Hafa tokoa ny fomba fiasa sy ny fomba fiaina nananany izay tsy nanaiky lembenana tamin’ny fananararaotana nataon’ireo vahiny nitetika hanambaka ny Malagasy. Nijoro sy tsy nanaiky lembenana izy, ka naharomotra ireo mpijirika sy mpanao ampihimamba. Noketrehina ny fandrodanana azy, niafara tamin’izao fahapotehin’ny firenena mandrak’ankehitriny izao. Hainy kosa anefa ny mandresy lahatra ny rehetra mba tsy hisian’ny tombo sy ala ka nisian’ny fahatokisan’ny vahiny azy bebe kokoa, ka mbola hakan’ ny vondrona iraisam-pirenena ny heviny manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny. Tsy mba toy izay politika nampihariny kosa no misy ankehitriny. Tsy misy drafi-pampandrosoana mazava sy maty paika, tsy mba mahay mifandray amin’ny antanantohatra rehetra eto amin’ny firenena, manaiky lembenana sy baikon’ny vahiny amin’izay tian-katao. Mpitondra tsy manana hazondamosina sisa no misy eto, ka tsy atao mahagaga raha izao no niafaran’ny firenena taorian’ny nialan’i Marc Ravalomanana teo amin’ny fitondrana. Tsapan’ny maro ankehitriny fa raha tsy nanaovana antsojay i Marc Ravalomanana dia ho toy izao mihitsy ny fiainan’ny Malagasy.